Qeybta Isbarbarka Qalabka
Product Isbarbar qaybta
Febraayo, 2015 Geospatial - GIS, GPS / Qalabka, tabo cusub
Geo-dhigma urursan hal meel, dhammaan waxyaabaha qiimaha u eegis GIM International iyo International Hydro. Geo-matching.com waa web site madax banaan alaabooyinka hardware xirfadeed iyo software berrinkii geomatics, hydrography iyo nidaamo la xiriira. Waxaan rabnaa in aan keeni visitors our gudbaan laqdaba ee gaarka u ah iyo in la siiyo fursad inay is barbar dhigaan wax soo saarka ka soo saarayaasha kala duwan, ka akhrisan ku saabsan fikradaha siiyo by isticmaala, si ay wax iibsadaa kasta oo gaar ah si ay u sameeyaan xukunka isku dheeli tiran. Geo-dhigma bixiyaa guudmar cajiib ah 800 la xiriira geomatics iyo waxyaabaha hydrography, 32 segmented galay qaybaha.
Geo-matching.com waxaad ka heli kartaa:
Raadi faahfaahin faahfaahsan oo ku salaysan waxyaabo ku saabsan wax ka badan waxyaabo 800 ah,
Ka akhri fikradaha iyo ra'yiga ka soo jeeda xirfadlayaal kale,
Helitaanka xogta si dhakhso ah, si fudud oo bilaash ah.
Riix linkyada hoose si aad u aragto qaybaha wax soo saarka:
Meelaha la duubo ee loo yaqaan "Laser Ledger"
Radar Dhexdhexaadin ah
Sawirleyda Laser-ka ah
UAS for Mapping iyo 3D Moodaynta Model Processing Software Imagery Software
Software La-qabsashada La-qabsiga Sawir-fogaynta
Nidaaminta Cilmi-baarista Cloud Cloud
Sawirada Daariyaal Dijital
Imtixaanka HR Satellite
ADCPs - Aqristayaasha Doomaha Aqbalaha ah
AUVs - Gaadiidka Maskaxda ee Gobollada
Cadaadiska hoose ee cadaadiska
Software Hydrographic Software
Nidaamka Nidaamka Nidaamka Nidaamka
Nidaamka Farsamaynta Marinalka
ROVs - Gawaarida Qalabka ah ee Qalabka ah
Barnaamijka Qaybinta Seddexaad
Xilliyaal shakhsi ah
Qaybaha hoose ee hoose
USVs - Gawaarida aan xakameynin
Post Previous«Previous Geomarketing vs. Privacy: Impact of geolocation ee user caadi ah
Post Next georeference jaleeladaNext »
2 Jawaab in "Qeybta Isbarbar-dhigga Qalabka"
Sergio misael hubka rosale isagu wuxuu leeyahay:
Anigu ma haysto barnaamijka si aan u soo dejiyo dhibcaheyga ugu sareeya xariiqda saldhigga-202 kaasoo iga caawin kara
Shop4leica isagu wuxuu leeyahay:
Nasiib darro, ma aha in dhammaan kuwa wax soo saarka wax lagu baaro ee waaweyn lagu daro. Guud ahaan hab fiican oo loo barbardhigo qalabka wax lagu baaro.